Swirl: Platform Na-ere Ahịa Maka Retlọ Ahịa Maka Ndị Na-ere ahịa Isi | Martech Zone
Satọdee, Nọvemba 2, 2013 Satọdee, Nọvemba 2, 2013 Douglas Karr
Uzo In-Store Mobile Marketing Platform ™ bụ ikpo okwu mbụ ka ndị na-ere ahịa buru ibu kee ma nyefee ọdịnaya ahaziri iche ma nye ndị na-azụ ahịa dabere na ọnọdụ ha kpọmkwem n'ime ụlọ ahịa mkpọsa anụ ahụ. Ikpokoro swirl na-enye ihe ngwụcha njedebe maka ndị na-ere ahịa iji jikwaa mkpọsa dị irè nke na-agwa ndị ahịa ha okwu site na ngwaọrụ mkpanaka ha n'ebe ọ bụla site na larịị agbata obi, gbadaa ruo n'otu mpaghara ụlọ ahịa.
Na Mee, Swirl malitere usoro mmemme na ndị na-ere ahịa mba dị iche iche gụnyere Alex na Ani, Kenneth Cole, na Timberland bụ ndị gosipụtara ntinye aka na ịzụ ahịa ahịa dị elu, na-enweghị atụ Pasent 75 na-ngwa ahịa na-emeghe ọnụego.
Anyị hụrụ nsonaazụ dị mma site na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri Swirl anyị gbara ọsọ na ụlọ ahịa anyị n'oge ọkọchị. Ndị ahịa nwere ekele maka ịnweta ekwentị ahaziri iche na ụlọ ahịa; nke a bụ ezigbo ụzọ ka anyị si jikọọ na ndị ahịa dijitalụ na-arịwanye elu taa. Dabere na ihe anyị hụgoro ugbu a, anyị na-atụ anya ịgbasa ojiji nke teknụzụ azụmaahịa Swirl na ebe ndị ọzọ Timberland na 2014. Ryan Shadrin, onye osote onye isi ụlọ ahịa na azụmaahịa na Timberland.
Swlọ Ahịa Ahịa Na-ere Ahịa swirl na-ejikọ micro-ọnọdụ ezubere iche na ngwa ndị na-ere ahịa ọ bụla iji nyefee ozi dị mkpa, ọdịnaya na onyinye nye ndị ahịa - ka ha na-azụ ahịa. Kwadoro mgbama Bluetooth® Low Energy, Swirl nwere ike ịkọwa kpọmkwem ọnọdụ nke onye na-azụ ahịa n'ime ụlọ ahịa, dịka wara wara nwa ma ọ bụ ngalaba elektrọnik, n'otu oge ma nyefee ozi dị oke mkpa, ọdịnaya yana onyinye iji kwalite ahịa.
The Swirl n'elu ikpo okwu na-agụnye
Swirl SecureCast ™ mgbama - Onyonyo nke ime ụlọ nke Bluetooth® Low Energy dị n'ime onwe ya, batrị kwadoro na nkeji ole na ole, na-arụ ọrụ gafee Apple na gam akporo smartphones, ma na-akpaghị aka nyochaa kpọmkwem ọnọdụ nke onye na-azụ ahịa nke banye na ngwa ndị na-ere ahịa. Ngwaọrụ SecureCast nwere ike ịhazi ya dịka dakọtara nke ọma, mepee Apple iBeacons ma ọ bụ, maka ndị na-ere ahịa metụtara data na nzuzo nke ndị ahịa, enwere ike ichebe ya site na nzuzo nke Swirl na teknụzụ nchekwa.
Software Development Software Development Swirl (SDK) - Na-enyere ndị na-ere ahịa aka itinye teknụzụ Swirl ngwa ngwa na ngwa mkpọsa ngwa ahịa nke aka ha, gụnyere ike ịme ndị na-azụ ahịa ihe nwere iche nke ukwuu na nke ahaziri iche dabere na ọnọdụ ime ụlọ dị ka mgbama SecureCast kpebiri. Enwekwara ike ịgbakwunye otu ahụmịhe mkpanaka ụlọ ahịa na ngwa nke onye ọ bụla nke atọ iji gbasaa ndị na-ege ntị ma chụpụ ahịa ụkwụ ọzọ na ụlọ ahịa mkpọsa.
Njikwa Azụmaahịa Swirl - Onu ogugu nke ahia ahia nke onwe ha maka ichota ulo oru ntughari na nchịkọta, na-eme ka ndị na-ere ahịa nwee ike ịmepụta ahụmịhe mgbasa ozi immersive nke na-akpaghị aka ka ndị ahịa na-azụ ahịa n'ime ụlọ ahịa. Ndị otu azụmaahịa nwere ike rụọ ọrụ nke ọma gafee ọtụtụ puku ụlọ ahịa nwere nchekwa echebere yana njikwa njikwa arụmọrụ. Igwe ojii a gbakwunyere na njikwa na-agụnye ọkaibe njikwa njikwa nke na-enye ohere ka onye na-ere ahịa jikwaa netwọkụ nke ọtụtụ puku ngwa ngwa SecureCast na Apple iBeacon site na otu interface.
Uzo Netwọk, Inc bụ ụlọ ọrụ teknụzụ nke na-enyere ndị na-ere ahịa aka itinye ike nke ekwentị iji dọta ma metụta ndị na-eri ihe mgbe ha zụrụ ahịa na ụlọ ahịa mkpọsa. Top Jeriko dị ka Timberland, Kenneth Cole, na Alex na Ani na-eji Swirl si mobile ahịa n'elu ikpo okwu na patent-echere micro-ọnọdụ technology ntọt ahịa okporo ụzọ, shopper njikọ aka na ahịa akakabarede.
Tags: mgbamana-echerena-ahịa ahịaahịa dabere na ọnọdụretailahịa ahiagbara gburugburu